दुर्भाग्यवश, हामी सबै यौन संचारित रोगहरु संग संक्रमण बाट प्रतिरक्षा छैन। जे होस् एक भन्न सक्छ, तर यदि तपाइँ एक सक्रिय र विविध यौन जीवन बिताउनुहुन्छ, तब चाँडै वा पछि तपाइँ सिफिलिस, गोनोरिया, trichomoniasis, जननांग दाद र यति मा जस्तै रोगहरु को अभिव्यक्ति सामना गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी साधारण तर नियमित कार्यहरु संग संक्रमण को जोखिम लाई कम गर्न सक्छौं।
पहिलो, एक कण्डम को उपयोग गर्न को लागी जब एक नयाँ साथी संग यौन सम्बन्ध सुनिश्चित गर्नुहोस्। के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि अब त्यहाँ उनीहरु को एक ठूलो चयन छ, दुबै पुरुष र महिला? यसबाहेक, महिला कण्डम को प्रभावकारिता पुरुष एक भन्दा कम छैन।
योजनामा ​​सबैभन्दा जोखिमपूर्ण यौन संचारित रोगहरु सेक्स को प्रकार गुदा र योनि हो। कन्डम बिना मौखिक सेक्स पनि खतरनाक छ, तर यदि योनि / गुदा संभोग संग संक्रमण को जोखिम पचास प्रतिशत छ, तब मौखिक सेक्स संग यो तीस प्रतिशत छ।
एक कण्डमले एक प्रतिशत को ety ० र nine -१० को रक्षा गर्दछ, यो आंकडा धेरै उच्च छ, तपाइँलाई लाग्दैन? दुर्भाग्यवश, क्रमशः यौन संचारित रोगहरु बाट एक सय प्रतिशत सुरक्षित हुन को लागी, तपाइँ या त सेक्स लाई बिल्कुलै छोड्नु पर्छ, वा "अश्लील" हेर्दा एक्लै यसमा संलग्न हुनु पर्छ।
त्यहाँ यौन संचारित रोगहरु बाट आफूलाई जोगाउन को लागी अरु धेरै तरीकाहरु छन्, तर तिनीहरुको प्रभावकारिता कण्डम को लागी काफी कम छ। यिनीहरु गुप्तांग धुने र एन्टीसेप्टिक औषधिहरु जस्तै क्लोरहेक्सिडाइन र मिरामिस्टिन संग डचिंग गरीरहेका छन्। तर, उदाहरण को लागी, डचिंग को एक साइड इफेक्ट छ - यदि त्यहाँ सबै पछि एक संक्रमण थियो, डचिंग द्वारा तपाइँ यसलाई अझ धेरै गुप्तांगहरुमा ड्राइभ गर्नुहुनेछ। तेसैले एन्टीसेप्टिक्स मात्र एक कन्डम संगै, यसको सट्टामा होइन!
खैर, कृपया ध्यान दिनुहोस् कि गर्भनिरोधक (फोम, क्रीम, suppositories, चक्की) तपाइँलाई मद्दत गर्दैन यदि तपाइँ गोनोरिया वा, अझ खराब, एचआईभी संक्रमणको सामना गर्नुहुन्छ।
कम्तीमा एक पटक हरेक छ महिना मा एक पटक नबिर्सनुहोस्, र एक सक्रिय यौन जीवन र बारम्बार साझेदारहरु को परिवर्तन संग - अधिकतर, एक पशु चिकित्सक द्वारा जाँच गरीन्छ र सबै आवश्यक परीक्षणहरु लिनुहोस्, किनकि यौन संचारित रोगहरु को रोकथाम लगभग प्रभावी छ। एक कण्डम, र धेरै धेरै रोगहरु को कपटी तथ्य यो हो कि प्रारम्भिक चरण मा यो निको पार्न गाह्रो छैन, तर हरेक दिन यो अधिक र अधिक कठिन बन्छ।
मौसा: कारण र उपचार
ब्याक्टेरिया र भाइरसहरू माइक्रोवर्ल्डको आधार हुन्
सिफलिस रोग: परिणाम, निदान र उपचार सुविधाहरू
थ्रश भनेको के हो? के पुरूष स्त्रीबाट पुरुषमा संचारित छ?
पुरुषहरूमा एड्सको लक्षण लक्षण
पछिल्लो शक्ति बढाउने परम्परागत विधिहरु
अर्को के म सौना मा बियर पिउन सक्छु?
61 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,762 प्रश्नहरू।